Rindran-kira iarahana amin’ireo mpanakanto mpitory ny filazantsara maro isan-tsokajiny no hankalazana izany amin’ny volana novambra, isan-kariva. Nisy omaly ny fitokanana ny trano vaovao, asa tsy nisy takalony fa avy amin’ny fitiavana sy ny herim-pon’ny mpino, raha araka ny fanazavan’ny filohan’ny komity mpikarakara Razafimandimby Mamitiana. Tao anatin’ny dimy taona no nanaovana ny asa tafiditra tao anatin’ny vinan’ny filohan’ny fiangonana FJKM ankehitriny ny mpitandrina Irako Ammi Andriamahazosoa tamin’ny taona 2005, planina mandritra ny 16 taona ho avy. Eo ihany koa ny fananganana fiangonana iray isan-taona ka toy ny any Vondrozo izay efa tanterahin’ireo mpino eo anivon’ny fiangonana Fjkm Androndra ankehitriny. Tsiahivina moa fa miisa 3.000 ny mpino eo anivon’ity fiangonana iray ity ankehitriny ka ny 1500 amin’ireo no mpandray ny fanasan’i Tompo. Nofaranana tamin’ny fiarahan’ny mpino nisakafo ny hetsika.